Jimcaha, Agoosto 11, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
FIIRO GAAR AH: Haddii aad ka fekereyso inaad sidan sameyso, hal qoraal oo taxaddar leh. Google waxay leedahay tixraacyo magac bixin oo adag oo leh API-kooda, markaa iska hubso inaadan ku beddelin doorsoomayaashaas magacyo kale! Ma shaqeyn doonto.
Hadda, ku saabsan helitaanka qulqulaya. Hadaadan akhrin Dhicin Point The waxaa qoray Malcolm Gladwell, waa akhris xiiso badan. Ma doonayo inaan burburiyo erayada Mr. Gladwell, laakiin asal ahaan waxay ka hadlaysaa xaqiiqda ah, inta badan, waxay umuuqataa inay jirto dhibic tilmaamaysa go'aannada aan qaadanno ama dhacdooyinka dhabta ah ee ka dhacaya ganacsigeenna iyo nolosheena.
Ka dib markaan geliyay macluumaadka kaararka deynta si aan uga baaraandego iibsigeyga, waxaa jiray sanduuq dheeri ah oo dheeri ah oo aan ku bixin karo $ 4.99 si ay shirkaddu u ilaaliso macluumaadkeyga diiwaangelinta haddii ay dhacdo inaan lumiyo oo aan u baahdo inaan dib u rakibo oo aan dib u diiwaangeliyo barnaamijka. Waxaan ka fikiray daqiiqado… oo waxaan hubiyey sanduuqa. Waxaan xasuustay inaan email u diro iibiye kale markaan lumiyay furaha diiwaangelinta codsigooda oo aan u baahdo inaan dib u rakibo.
Waan qaniinay! Waxaan u badan tahay inaanan waligey qorin oo aan weydiin furaha, laakiin waxaan ku bixiyay $ 4.99 dareenkaas xiisaha leh ee diiran. Kama xanaaqsana - runti waa qiime macquul ah oo lagu ilaalinayo macluumaadkeyga. Waxaan layaabay iibiyeyaasha kale inaysan sidan sameynin sidoo kale. Kani waa nooca uu Gladwell kaga hadlayo buugiisa. Horaa laygu iibiyey barnaamijka softiweerka ah, waxay si fudud i weydiisteen xoogaa yar ka dib markii aan horeyba u galay Fiican!
Aug 1, 2007 at 7: 28 AM
Gladwell waxaa laga yaabaa inuu sameynayo wax kuu keenay fuzzies diiran, laakiin waa wax, aniga ahaan, waa inuu qayb ka noqdaa adeegga macaamiisha aasaasiga ah. Jawigii hore ee ahaa in si fiican wax loo qabto dadkuna shaqada ayey ku soo noqon doonaan.
Labo jeer in ka badan 25 sano oo aan isticmaalayay kumbuyuutaro, miyaa inaan la xiriiraa iibiye ama sameeye softiweer furaha furaha. Sababo aan caadi ahayn awgood, xeerarkaasi waligood kama dhigin keydkayga sii kordhaya ee tirooyinka taxanaha ah iyo macluumaadka diiwaangelinta ee ku keydsan keyd xog-ogaal ah oo ku jira qorshaheyga macluumaadka shaqsiyeed ee aan adeegsaday tan iyo 1992 oo la yiraahdo Time iyo Chaos (http://www.chaossoftware.com/ haddii aad xiiseyneyso).
Mid ka mid ah shirkadaha aan la xiriiray ayaa i siisay nambarkeyga - iyada oo aan la soo saarin - afar sano ka dib iibsigii ugu horreeyay. Intii lagu guda jiray afarta sano tan iyo bilowgii iibka, waxaan bedelay macaamiisha emaylka, waxaan u cusbooneysiiyay nidaam cusub oo hawlgal, waxaanan ka iibsaday waxyaabo kale. Qayb ka mid ah "diiwaanka macaamiisha" shirkadda waa inuu markasta ilaaliyaa waa liiska koodhadhka haddii aad dhacdo, macaamiisha iyaga mar kale u baahan yahay.
Lacag bixinta iyada oo la mid ah khidmadda shirkado badan oo caymis ah ay hadda isku dayaan inay ku soo oogaan caymiskooda “sahlanaanta” helitaanka warqad ku saleysan or biilasha elektiroonigga ah (ma ahan ikhtiyaari ahaan, maanka ku hay), iyo sidoo kale khidmadda "ku habboonaanta" bixinta jeeg ($ 1.25 ujrada) ama "ku habboonaanta" bixinta elektaroonigga ah ($ 1.00 khidmad). Khidmadaha waa lagu qosli karaa, sida ugu fiican, laakiin waxay muujinayaan ganacsiyada maraya qiimaha caadiga ah ee ganacsiga si toos ah, oo ay weheliso faaiido faa'iido.